Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxa uu sharxayaa sida isticmaalka iyo ka ilaaliya macluumaad kasta oo aad siin marka aad isticmaasho website this. waxaa ka go'an in ay hubiso in aad u gaarka ah la ilaaliyo. Ma habboon tahay in aan kaa dalabno inaad bixiso macluumaad gaar ah oo aad la cayimi karo marka la isticmaalayo website this, ka dibna waxaa laguu xaqiijin karaa in kaliya loo isticmaali doonaa si waafaqsan bayaanka gaarka this. waxaa laga yaabaa in la beddelo siyaasadda this waqti ka waqti by xariirta this page. Waa in aad this page waqti ka hubi in waqti si loo hubiyo in aad ku faraxsan tahay wixii isbeddel yihiin.
macluumaadka kale ee la xiriira in ay sahan macaamiisha iyo / ama dalabyo
Waayo, liiska dhamaystiran of cookies aan ururino arko List of cookies aan ururino qaybta.
laga yaabaa in aan si teelteel ah u soo diri emails xayaysiis ah oo ku saabsan waxyaabaha cusub, dalabyo gaar ah ama macluumaad kale oo aynu u malayno in aad ka heli kartaa xiiso leh oo isticmaalaya cinwaanka email ah oo aad bixisay.
Muddo markii la joogaba, waxaan sidoo kale laga yaabaa inay isticmaalaan macluumaadka si waxaad la xiriiri ujeedooyin cilmi baaris suuqa. Waxaa laga yaabaa inaan waxaad la xiriiri by email, telefoon, fax ama mail. Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka si astaysto website-ka sida laga soo xigtay danahaaga.
cookie A waa file yar oo ku weyddiiyo ogolaansho in la dul dhigo drive adag your computer ee. Marka aad ogolaato, file waxaa ku daray oo cookie ka caawisaa falanqeeyaan gaadiidka web ama kuu ogolaanayaa inaad ogaato marka aad booqato site gaar ah. Cookies u oggolaadaan codsiyada web si ay uga jawaabaan in aad shaqsi ahaan. codsiga internetka hanatid kara hawlaheeda si ay baahiyahaaga, jecelyahay iyo wuxuu necebyahay by ururinta iyo xusuusta macluumaadka ku saabsan kala doorashada.
Waxaan isticmaalnaa cookies log gaadiidka si loo ogaado taas oo pages loo isticmaalay. Tani waxay naga caawisaa falanqaynta xogta ku saabsan web page gaadiidka iyo horumarinta website-kayaga si aad u hanatid baahida macaamiisha. Waxaan kaliya macluumaadkan isticmaal ujeedo falanqayn tirakoobka, ka dibna xogta laga saaro nidaamka.
Guud ahaan, cookies naga caawiyaan kuu siiyaan website ka wanaagsan, by noo suuro gelin in lala socdo oo aad ka heli pages waxtar leh oo aad aan samayn. cookie A gudaheedana sinaba uma ay ina siinaysaa in ay helaan your computer ama macluumaad kasta oo adiga kugu saabsan, oo aan ka ahayn xogta aad doorato in aad nala wadaagto. Waxaad dooran kartaa in aad aqbasho ama diiddo cookies. daalacashada web intooda badan si toos ah u aqbalo cookies, laakiin waxaad caadi ahaan beddeli kartaa meesha aad browser inay hoos u cookies haddii aad jeceshahay. Tani waxaa laga yaabaa in aad looga hortago ka faa'iidaysanaya oo ay ka buuxaan website-ka.
Waxaad dooran kartaa inaad xaddido ururinta ama isticmaalka macluumaadkaaga shakhsiyeed ee siyaabaha soo socda:
mar kasta oo lagu weydiiyo in aad buuxisid foomka lagu qoray website-ka, raadiyo sanduuqa in aad riix karaa si ay u muujiyaan in aadan rabin in macluumaadka loo isticmaalo by qof ujeedooyin marketing toos ah
haddii aad horey isku raacay noo isticmaalaya macluumaadkaaga shakhsiyeed ujeedooyin marketing toos ah, waxaa laga yaabaa in aad maskaxdaada beddesho waqti kasta adiga oo u qoraya ama noo soo dirayso at sales@armati.biz
Waxaan ma ka iibin doonaa, qaybiyo ama kiraysan macluumaadkaaga shakhsiyeed in labada dhinac saddexaad haddii aan heysano aad ogolaansho ama waxaa looga baahan yahay sharci ahaan inay sidaa sameeyaan. Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed si aad u soo dirta warbixin ku saabsan dhiirrigelin labada dhinac saddexaad oo aynu u malayno in aad ka heli kartaa xiiso leh haddii aad noo sheegto in aad rabto si ay u dhacaan.
Waxaad codsan kartaa faahfaahinta macluumaadka shakhsiyeed oo aan adiga kaa heyno hoos Data Protection Act 1998. lacag yar ayaa noqon bixin doonaa. Haddii aad jeclaan lahayd nuqul ka mid ah macluumaadka lagaa hayo on fadlan u qor.
List of cookies aan ururino
Shaxda hoose ku taxan cookies aan u ururiyaan iyo macluumaadka ay ku kaydiso.
Ururku wuxuu la gaadhigii shopping.
Dukaamada info category on bogga, u ogolaanaya in ay si dhakhso ah muujiyaan pages ka.
The alaabta in aad leedahay ee liiska Products barbardhig.
lacagta aad ka jeeclaadeen
version An Windows XP of id macaamiisha aad la dukaanka.
tilmaame An haddii aad hadda meesha maadan soo galay dukaanka.
version An Windows XP ee group macaamiisha aad ka tirsan tahay.
Dukaamada ID Qaybaha Macaamiisha
calanka A, taas oo muujinaysaa in caching waa naafo ah ama aan.
Waxaad sesssion ID on server ka.
Kuu ogolaaneysa martida inay edit amray.
category ugu danbeysay ee idin soo booqday.
The alaabta ugu dambeeyey aad u arkaan.
Muujisaa in fariin cusub ayaa la helay.
Waxay muujisaa in ay la oggol yahay in ay isticmaalaan kayd.
link A si ay macluumaad ku saabsan gaadhi iyo arkaysid taariikhda haddii adigu waad weyddiisan goobta.
ID ee kasta ee doorashada aad dhawaan u codeeyay.
Warbixin ku saabsan waxa loo tiriyey aad u codeeyay on.
waxyaabaha aad dhawaan marka la barbar dhigo.
Warbixin ku saabsan waxyaabaha aad ku saxafadeed saaxiibbadaa.
view dukaanka ama afka aad ku dooratay.
Muujisaa in macaamiisha ah loo ogol yahay in ay isticmaalaan cookies.
The alaabta in aad dhawaan u arkaan.
Liiska An Windows XP ee alaabta ku daray in ay aad liiska.
Tirada alaabta ee Barca.